Naqshadaha jaranjarada casriga ah
Iyada oo leh jaranjarooyinka caadiga ah iyo kuwa casriga ahba oo laga heli karo foomka xirmada, waxaan u leenahay jaranjaro codsi kasta. keenaya diirimaad iyo dabeecad guri kasta, waxaad hubsan doontaa inaad wax ka hesho baaxaddayada ballaaran.
ACE heerarkeeda kala duwan ee jaranjarada lagu iibiyo waxay ka kooban tahay alwaax iyo jaranjaro biro ah, taasoo fududeyneysa in la waafajiyo qaabka naqshadda booskaaga.
Raad -raaca yar ee jaranjarada muquuninta ayaa sahlaysa in la waafajiyo nashqad kasta. Jaranjarooyinka muquuninta waxay badbaadiyaan mitir laba jibbaaran oo qiimo leh maxaa yeelay waxay degan yihiin aag aad uga yar jaranjarada caadiga ah. Iyada oo leh qaabab dhiirranaan leh iyo qaabaynno kala duwan, waxay kaloo noqon karaan shay astaan ​​u ah mashaariicda.
Xariga labalaabsani waa naqshad jaranjarada sabaynaysa oo ku tusaysa labada xadhig hoostooda oo ka soo geesaha jaranjarada si aad u eegto sabayn. Jaranjarooyinka labalaabka ah waxaa loo isticmaali karaa codsiyada degaanka ama ganacsiga, iyo sidoo kale mashaariicda gudaha iyo dibaddaba. Jaranjarada laba-xadhig leh waxay u dareentaa qaab ahaan inay ka xasilloon tahay jaranjarooyinka xadhkaha ah.